टेस्ट्युब बेबी र मेरी प्रेमिका | मझेरी डट कम
kbs — Mon, 04/13/2009 - 19:51
कर्नेसन धुवाँ र तिम्रो झझल्को (कथा संग्रह)
रात छिप्पिँदै बिस्तारै कालो बन्दै गइरहेको छ। बहिर कुकुर कराएको सुनिन्छ। पर कतै मोटरको मधुरो आवाज पनि आइरहेको छ। ठीक त्यही वेला मैले आफ्नो कोठाको कम्प्युटर अन गरेँ र टेलिफोन लाइन थुतेर इन्टरनेट जोडेँ। शायद यो त्यस्तै राति बाह्र बजेको समय हुनु पर्छ।
म यतिखेर इन्टरनेटमा बस्नुमा यौटा रमाइलो सन्दर्भ छ। पछिल्ला दिनमा मैले रमाइलो च्याट पार्टनर फेला पारेको छु। उसका अभिव्यक्ति मलाई निकै मन पर्छन्। यति चाखलाग्दा हुन्छन् कि म ऊबाट धेरैथोक सिकिरहेको अनुभव गर्छु। उसका कुराहरु जति चाखलाग्दा हुन्छन्, उत्तिकै अचम्मलाग्दा पनि। उसैसँग कुरा गर्न म आज पनि यो मध्यरातसम्म बसेको छु।
यो च्याट पार्टनर किन अचम्मलाग्दो छ भन्ने कुरा मैले बताउनै पर्छ। उसले मेरो ‘एड’ कसरी पायो मैले सोधिनँ। मलाई त्यो त्यति ठूलो चासोको विषय पनि बनेन। तर उसैले मेरो इमेल उसको ‘एमएसएन’ मेसेन्जरमा पहिले एड गरेकै हो। त्यसपछि मात्र मैले उसको आइडिलाई स्वीकारेर ओके गरिदिएको हुँ। किन पनि भने मलाई च्याट पार्टनर बढाउनु थियो मैले ओके गरिदिएँ। त्यसपछि हाम्रो च्याट सामान्य रुपमा शुरु भएको हो।
शुरुकै दिनमा उसले मलाई अचम्म पारेको थियो। मैले उसको नाम सोधेको थिएँ जब ऊ मेरो मेसेन्जर बक्समा अनलाइन देखिएको थियो।
त्यसपछि उसले आफ्नो परिचय दिँदै भनेको थियो-’म टेस्ट्युब बेबी हुँ। माने टेस्ट्युब छोरो हुँ।’मलाई शंका लाग्यो तत्काल सोधेँ-’तिमी कम्प्युटर ह्याकर त होइनौ?’
‘अहँ होइन होइन , सत्य होइन’ उसले उत्तर दियो-’आत्तिनु पदैन।’
‘सत्य सत्य म टेस्ट्युब बेबी हुँ, तिमीले पत्याएनौ?’ उसले तुरुन्तै लेख्यो।
त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध विस्तारै चौरको दुवोजस्तो गाँजिदै र बढ्दै गएको बयरको पोथ्रो जस्तो झाँगिदै गएको थियो।
इन्टरनेट कनेक्सन भएको एकै छिनमा एमएसएन साइन इन भएको संकेत गर्‍यो। उसले अघिनै साइन इन गरिसकेको रहेछ।‘सञ्चै छौ?’, अंग्रेजी वर्णलाई रोमन नेपाली बनाएर उसले पहिले लेख्यो।
‘ठीक छु’ सरल नेपाली कै लवजमा मैले उत्तर दिएँ। यसैगरी हाम्रो च्याट गफ क्रमश बढ्दै गयो।
‘दिनहरु कसरी बित्दैछन्?’-मैले लेखेँ।
‘त्यसरी नै जसरी हिजोका दिनहरु वितेका थिए’ टेस्ट्युब छोराले उत्तर फर्कायो-’अर्को एउटा दुःखदायी दिनको सूर्यलाई जन्माउन एउटा दिनको सूर्यको हत्या गरिरहेको छु। प्रत्येक दिनको हत्या गर्दै म दिन बिताइरहेको छु।’
उसका कुराहरु मलाई दार्शनिक लाग्थे। उत्तर आधुनिक दर्शन बोकेको कुनै व्यक्तिजस्तो लाग्थ्यो उसको व्यवहार। लेखेँ-’तिमीसँग गफ गर्न पाएकोमा म धेरै खुशी छु।’
‘तिमीले किन आफ्नो नाम टेस्ट्युब बेबी राखेको भन्न सक्छौ?’ मैले उसको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा नगरी अर्को प्रश्न तेस्र्याएँ।
‘टेस्ट्युबमा वीर्य र डिम्ब घोलेर जन्माइएको हो मलाई। त्यसैले मलाई जान्नेहरु टेस्ट्युब बेबी भन्छन् मलाई’ उसको बिना हिच्किचाहट जवाफले ऊसँगको मेरो गफ झन् फरासिलो बन्दै गएको थियो।
‘तिमी विज्ञानको प्रगति रहेछौ, तिमीसँग गफ गर्न पाएकोमा म औधी खुशी छु टेस्ट्युब छोरा’ मैले निकै खुशी दर्शाएँ।
तर मेरो अपेक्षा विपरीत उसले उत्तर दियो-’तर विज्ञानको प्रगति भएर जन्मिनु परेकोमा म चाहिँ साह्रै दुःखी छु।’
जन्मिनुमा मान्छेहरु किन दुःखी हुन्छन्? मैले अचम्म मानेँ। र उसलाई पनि मेरो मनमा जे लागेको थियो त्यही कुरा सोधेँ। साथमा केही आश्चर्यका संकेत चिन्हहरु पनि पठाएँ।
‘म आफ्नो जन्मप्रति होइन, त्यसरी जन्मिनु परेको प्रति दुःखी छु’-उसले थप प्रष्ट पार्‍यो।म केही अचम्मित भएँ। केही जिज्ञासु भएँ। विज्ञानको प्रगतिबाट संसार हेर्न पाएको टेस्ट्युब बेबी किन यसो भन्दैछ मैले बुझ्न सकिनँ। सोधेँ-’किन तिमी यसमा साह्रै दुःखी छौ?’
‘हो’, उसले भन्यो ‘सबैभन्दा दुःख मलाई मेरो बाबु आमा नखुट्टिएकोमा छ।’
उसले आफू गम्भीर भएको केही संकेत चिन्हहरु पनि सँगै पठाएको थियो। म उसलाई केही सोध्न चाहँदै थिएँ । उसले त्यही कुरा लेख्यो-’म आज तिमीलाई मेरो वास्तविक कथा सुनाउँछु, सुन्छौ?’‘
यदि तिमीलाई गाह्रो पर्दैन भने’-मैले सहानुभूतिसहित लेखेँ।
‘सुन सत्य कुरा बताउन कुनै गाह्रो हुँदैन। जो सत्य कुरा बताउन गाह्रो मान्छन् ती कपटी हुन्। तीसँग इष्र्या र द्वेष बाहेका केही हुँदैन’, उसले भन्यो-’उनीहरु (अहिले म जसको छोरो भएर बसेको छु) ले प्रेम विवाह गरेका थिए। उनीहरु दुवै कलेजका प्रोफेसर हुन्। तर उनीहरुबीच छोराछोरी जन्माउने विषयमा मतान्तर रहेछ। यो प्रमाण मैले अहिले भेटेको छु। त्यसैले टेस्ट्युबमा घोलिएको डिम्ब र वीर्य अर्कै आइमाइको पाठेघरमा गर्भाधान गरेर म जन्मिएँ। अर्कै आइमाइमार्फत मेरो बाबु (जो मलाई छोरो भनिरहेको छ) को पालन पोषणमा आएको हुँ।
अहिले मेरा बाबुसँग उसकी श्रीमती छैन। उसलाई छोडेर गइसकी।’
उसको कुराले मेरो मथिङ्गल चकरायो। मैले केही बुझेजस्तो अनुभव गरेँ। केही नबुझेजस्तो अनभव गरेँ। उसको यौटै अभिव्यक्तिले मेरो मन भावुक भयो। ‘किन तिमी उदास त? तिमीसँग माया गर्ने बाबु त रहेछ नि?’ मैले लेखेँ।
‘म साइनोमा उनीहरुको छोरो हुनु परेकोमा दुःखी छैन’-उसले तुरुन्तै लेख्यो,’ हो उनीहरुबाट सक्दो माया पाएको छु।’
‘अनि अरु के भयो त?’ मैले जिज्ञासा राखेँ।
‘आफ्नो पाठेघरमा (प्राकृतिक) गर्भाधान नगराएर भ्रुणको जन्मन पाउने अधिकार हनन् गर्ने प्रकृति विरोधी आइमाइ (हरु) प्रति म निकै दु:खी छु’, उसले आफ्नो दुखेसो पोख्यो-’यो विखण्डन र प्रकृतिविरोधी काम विज्ञानले गरेको हो र मैले त्यो पत्ता लगाएँ।’
‘कसरी आइमाइ असक्षम पनि त हुन सक्छे’ म थप जिज्ञासु बनेँ।‘एकै छिन है’, उसले लेख्यो। मैले उसका अभिव्यक्तिहरु पर्खिएँ। र एकै छिनमा एउटा स्क्यानिङ म्याटरको एटेच फाइल मेरो इमेलमा पठायो।
‘त्यो इमेलम मेरो बाबुलाई छाडेकी प्रोफेसर प्रेमी श्रीमतिले लेखेको चिठी छ । राम्ररी पढ, प्रमाण त्यही हो’, उसले लेख्यो-’त्यो मैले मेरो बाबुको डायरीमा भेटेको थिएँ। स्क्यानिङ गरेर राखेको हुँ र यसलाई मैले एक्काइसोँ शताब्दीका युवतीहरुको भावना हो भन्ने बुझेको छु।’मैले मेल खोलेँ। श्रीमान प्रोफेसरलाई श्रीमति प्रोफेसरले लेखेको पत्र थियो। निकै बेर पढेँ। पत्र यस्तो थियो-
प्रिय………आ आफ्न तर्कमा अडिग रहेर हामी असहमत भयौँ। तिमीलाई मभन्दा तिम्रो वीर्य प्रिय लाग्यो। मैले सम्मान गरेको विज्ञानको प्रगतिलाई तिमीले घृणा गर्‍यौ। म मेरो पाठेघरमा गर्भाधान गर्न चाहन्न। तिमी टेस्ट्युब छोराको बाबु बन्न इन्कार गर्छौ। तिमी विज्ञानको प्रगति मुन्तिर आफू नंपुसक नभएको देखाउन चाहन्छौ। म मेरो पाठेघरमा गर्भाधान गर्न सक्षम भएर पनि विज्ञानको प्रगति उपभोग गर्न चाहन्छु। हामी देख्नका लागि श्रीमान् श्रीमति हौँ।तर आफू आफूमा स्वतन्त्र छौँ। त्यसैले म मेरो स्वतन्त्तताको पूर्ण प्रयोग गर्न चाहन्छु। म आधुनिकतामा डुब्न चाहन्छु। तिमी त्यसमा छट्पटाउँछौ।
प्रोफेसर अन्त्यमा,यो पत्र लेख्दा साँझ परिरहेको छ।पश्चिममा घाम पहेँलो भएर डुब्दैछ। म हामीले प्रेम साटेको विश्वविद्यालयको हरियो चौरमा छु। केही विद्यार्थी हिजो हामीले प्रेम गर्दा अंगालिएजसरी नै यी पोथ्राइला रुखका फेदमा अंगालिएका छन्। म यतिखेर विवाह पूर्व र पछिका तिमीसँग बिताएका हरेक साँझ सम्झिरहेछु। हामीबीच असहमति गम्भीर रुपमा बढेपछि मैले एक्लै बस्ने निर्णय गरेँ र यो पत्र लेखेँ। यसलाई सुरक्षित राख। यही पत्रमार्फत् जानकारी दिन्छु-तिम्रो जन्म दिनको लागि यौटा राम्रो उपहार तयार गर्न लगाएको छु। त्यो टेस्ट्युब बेबी हो। तिमी जन्मिएको ३६ वर्ष पूरा भएको दिन मेरो उपहार टेस्ट्युब छोरो जन्मिएको ३६ हप्ता हुनेछ। र मेरो प्रेमको अन्तिम चिनो तिमीले त्यसैलाई स्वीकार्नु पर्नेछ। मलाई माफ गर, मैले तिम्रो प्रस्ताव स्वीकारेर मेरो पेट अस्वभाविक रुपमा बढेको देखाउन सकिनँ।तिम्रोप्रोफेसर श्रीमति
मैले चिठी पढिसकेको जानकारी गराएपछि उसले मेरो दिमागले नसोचेको कुरा गर्‍यो-’अब तिमी आफ्नो वीर्य बेच्न जाँदैनौ?’
हाँसोको संकेत चित्रसहित मैले टेस्ट्युब छोरो नजन्माउने मेसेज सेन्ड गरेँ।
‘तिमीलाई थाहा छ ? अब शहरका क्लिनिकहरुमा दूध वा तेलका ट्याङ्कीजस्ता वीर्यका ट्यांकीहरु राखिनेछन्। मेरो उत्पादन त्यसैको संकेत हो’, टेस्ट्युब छोराले मेरो उत्तर बाहेकको तर्क गर्‍यो -’र शहरका डाक्टरहरु वीर्य वेचेकै पैसामाथि सुत्नेछन्।वीर्य वेच्ने पुरुषहरु शिथिल भएर कालो पत्रे सडकमा आफ्नो मधुरो छाँया हेर्दै लठक् लठक् शिथिल हिँड्नेछन्।’
‘रमाइलो कुरा त अर्को छ केही समय पछि नै मेरा बाबुका श्रीमतीजस्ता आइमाइहरु (युवतीहरु) शहरका क्लिनिकमा योनीको प्लास्टिक सर्जरी गर्न लाम लाग्नेछन्। र डाक्टरलाई उनीहरु भन्नेछन्-’ˆफ्याँकिदेऊ डाक्टर मेरो पाठेघर फ्याँकिदेऊ। मसँधै कुमारी बस्न चाहन्छु।’ क्लिनिकहरुमा पाठेघर झिकेर फ्याँक्ने महिलाहरुको लाम लाग्नेछ। प्रत्येक पक्की र शीशाले बेरिएका घरहरुमा विज्ञानको प्रयोगशाला बन्नेछ। त्यतिखेर अहिले जस्तो टेस्ट्युब बेबी जन्माउन कुनै अर्को महिलाको पाठेघर आवश्यक पर्ने छैन। प्रत्येक शीशाले वेरिएका घरका प्रयोगशालामा च्याँच्याँ गर्दै नानीहरु जन्मनेछन्, पोल्ट्रिफार्ममा चल्ला उत्पादन भएजस्तो। तर नानीहरुको पहिलो रुवाइले त्यतिबेला त्यहा कुनै स्वास्नीमान्छेको मन छुने छैन। तिनीहरु स्तन नझोलिएर टम्म हुनेछन्।’
‘श्रीमती/प्रेमीहरु टेस्ट्युब छोराकेँ बाबु बन्न इन्कार गर्ने पुरुषप्रेमी वा श्रीमान्को छातीको रौँहरु उखेलेर उनीहरु प्लास्टिकको बलबान पुरुष खेज्नेछन्।र, लोग्नेको छेवैमा तृप्त निद्रा सुत्नेछन्।’ यसपटक उसले निकै लामो अभिव्यक्ति लेख्यो। मैले उसका प्रत्येक अभिव्यक्ति ध्यान दिएर पढेँ।
मैले केही सोध्न नपाउँदै उसले फेरि लेख्यो-’हेर अब यहाँ कोही कसैको स्वास्नी हुने छैन। कोही कसैको लोग्ने वा छोरा छोरी पनि हुने छैनन्। (मेरोजस्तो साइनो हुनेछ सबैको) प्रत्येक पुरुषले वीर्य बेचिसकेका हुनेछन्। प्रत्येक आइमाइले डिम्ब बेचिसकेका हुनेछन्। त्यसपछिका सबै केटाकेटी विज्ञानको प्रयोगाशालामा जन्मिने छन्। प्रयोगशालामा जन्मिने ती छोराहरु कुनै दिन टिमिक्क छाती बनाएर हिँड्ने डिम्ब बेच्ने ‘आमाहरु’लाई नै सम्भोगको प्रस्ताब राख्नेछन्।ती छोरीहरु वीर्य वेच्ने पुरुषहरु (चाहे उनीहरुमा तिनकै वीर्य मिसिएको किन नहोस्) लाई प्रेमको प्रस्ताव राख्नेछन् र निर्धक्क संभोगमा लिन हुन चाहनेछन्।र टेस्ट्युब छोराछोरीले भन्ने छन्-’छैन तिमीसँग मेरो कुनै नाता छैन। म तिम्रो प्रेमी हुन सक्छु। तिमी र म लोग्ने स्वास्नी बन्न सक्छौँ। आऊ आजको रात सँगै सुतौँ।’ त्यसपछि मेरो बाबुका श्रीमतिजस्ता आइमाइहरु भावुक बन्दै फर्किएर छोडेका लोग्नेहरुसम्म आउने छन् र विज्ञानलाई प्रेम गरेको विगत सम्झिँदै हिक्हिकाउने छन् बुढो प्रेमीको अंगालोमा जतिबेला बुढा लोग्नेका हड्डीहरु विस्तारै मक्किँदै कमजोर भइसकेका हुनेछन्। हेरिबस तिमी यी सबै सबै देख्ने छौ।’
उसले आफ्ना तर्कहरु लेखिरह्यो। कतिसम्म भने म उसका तर्कहरु पढ्न मात्र भ्याइरहेँ। तर पनि उसलाई सोधेँ-’तिम्रो मतलब विज्ञानसँगको मान्छेहरुको प्रेम सत्यताको अन्तिम मोह हो भन्ने हो ?’
‘तिमीले ठीक भन्यौ। म तिमीलाई यही कुरा लेख्दै थिएँ ‘, उसले एकछिन पनि ढिलो नगरी लेखेको मेसेज मकहाँ आइपुग्यो-’विज्ञानको प्रगतिको नाममा हजारौँ आइन्स्टाइनको मृत्यु त प्रारम्भ भइसकेको छ नि।’
मैले उसको कुरा अलिकति पनि बुझिनँ। सोधेँ-’कसरी? तिमीले के भन्न खोजेको हो खासमा?’‘ल तिमीले यति सजिलो कुरा पनि बुझ्न सकेनौ?’, उसले यौटा जोकर चित्र पनि मेसेजसँगै पठायो-’कण्डम, निलोकन, डायफ्राम, नरप्लान्ट आदि छ नि, हो मैले यिनै परिवार नियोजनका साधनको कुरा गरेको हुँ जुन वीर्य र डिम्बको मिलनमा खलनायक बनेर देखिएको छ। विज्ञानको ‘गर्भ निरोधक प्रगतिले’ नजन्मँदै जन्मन सक्ने हजारौँ आइन्सटाइन, बुद्ध वा गान्धीहरु मारेको छ। परिवार नियोजनका यी सब अस्थायी साधनलाई भ्रुण हत्याको आरोपमा कारागार पठाउनु पर्छ। यो भ्रुण विनासको विकास विज्ञानले गरेको हो।’
उसले मान्छेहरु आधुनिकताको पाखण्डमा हिँडेको तर्क गर्‍यो। उसले लेख्यो-’विज्ञानले सबैलाई बाँधिसकेको छ। चाहेर नचाहेर मान्छे त्यसको भासमा फस्दैछन्। शुरुमा त्यसले रमाइलो दिइरहेको छ तर मान्छेको समवेदना, हार्दिकता र अनुभुतिहरुमा यसले विस्तारै डढेलो लगाउँदै छ।’
त्यसपछि अकस्मात मेरो कम्प्युटरमा इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भयो। हामीबीचको संवादलाई त्यसले टुक्र्याइदियो। विज्ञानको प्रगति कहिलेकाहीँ यस्तै हो भन्ने सोच्दै मैले पुनः कनेक्ट गरी साइन इन गरेँ।तर ऊ अनलाइन थिएन। ऊसँगका कुराहरु मैले सेभ त गरिनँ तर उसले एटेचमा पठाएको श्रीमति प्रोफेसरको चिठी भने अझै मेरो इमेलमा छ।•
आज पनि म मेरो कम्प्युटरअघि बसेर यो कथा लेखिरहेको छु। आफ्नो एमएसएन साइन इन मै छ। केही मेरा साथीहरु अनलाइनमा छन्। तर ऊ मेरो अनलाइनमा छैन। तै पनि मसँग प्रतीक्षा छ। र उसको सम्झनामा यो यौटा कथा छ।
कथा लेख्दै गर्दा म यतिखेर मेरी प्रेमिका सम्झिरहेछु। जो दिनभर साइबर क्याफेमा छिरेर च्याटमा कुरा गर्दै कुनै च्याट पार्टनरसँग छिल्लिन्छे र हरेक साँझ मसँग अँगालिन आउँछे। र भन्छे-’अनमोल, जन्माउन्न म कुनै सन्तान जन्माउन्न। खेप्न सक्दिन म गर्भको पीडा। र सक्दिनँ लालाबाला खेलाएर दिन बिताउन। त्यसप्रति कुनै मोह छैन मलाई। बस म तिमीलाई प्रेम गर्छु।’
म केही भन्न सक्दिनँ मेरी प्रेमिकालाई। टेस्ट्युब छोरासँगको च्याट गफ मैले कहिल्यै उसलाई सुनाइनँ। शायद उसले त्यसमा सहमति जनाउँदी हो वा नपत्याउँदी हो। टेस्ट्युब छोराले सुनाएको कुरा पनि म मेरो भाषामा सुनाउन सक्दिनँ। कतिसम्म पनि भन्न सक्दिनँ भने-’तिमी नारी हौ। तिमी आमा हुनुपर्छ।एउटी स्वास्नीमान्छेका लागि जिन्दगीको सबैभन्दा सुखद क्षण प्रसव पीडाको क्षण हो।जहाँ पीडाभित्र पनि खुशी हुन्छ। जहाँ पीडाभित्र पनि मीठो आनन्दबोध हुन्छ।’
उसले जितेकी छ मलाई हरेक कुरामा। पत्रपत्रिकामा टेस्ट्युब बेबीको समाचार पढेपछि एक साँझ उसले पनि लाडिँदै भनेकी थिइ-’हामी पनि टेस्ट्युब छोरा जन्माउन है।’ र केही बेर लजाएकी थिई।
मैले केही पनि उत्तर नफर्काएपछि ऊ अझै लाडिएर झन् नजिकिएकी थिइ र भनेकी थिइ-’हुन्छ भन्या?’ -मेरी प्रेमिका जसको छाला साह्रै गोरो थियो। तर चेतना त्यति गोरो हुन सकेको थिएन। यतिखेर शायद आफ्नै गर्भको छोरो खेलाउँदै होली कतै )
तर त्यतिखेर मैले उसको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै ओठको ल्याप्चे उसको गालामा टाँसिदिएर भन्न सकिनँ-’मलाई माफ गर प्रिय, म टेस्ट्युब छोराको बाबु बन्न सक्दिनँ।’
(कर्नेसन, धुवाँ र तिम्रो झझल्को संग्रहबाट)
अतिथि — Sat, 06/13/2009 - 14:30
sarai ramro ani realistic
अतिथि — Fri, 09/18/2009 - 07:03
sarai ramro ani realistic 6.
yeslai bigyanle nimtyayeko bikrita bhan6u ma.
any way writer lai mero tarfabata dherai dhanyabad.
चर्को घामले (बालकविता)
म पागल होइन डक्टर
बेकार सङ्का गर्छ्न् पति
कठै ती आमा !
बिम्ति! हजुर मलाई पनि दास बनाई देऊन
राज मात्र रह्यो अब हराएर निति
कविता लेख्ने गर्छु म